Esta 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
6 N’abalị ahụ, ụra gbafuru eze n’anya.+ N’ihi ya, o kwuru ka e wetara ya akwụkwọ e dekọrọ+ ihe ndị e mere n’oge gara aga. E wee gụpụta ha n’ihu eze. 2 Mgbe a nọ na-agụ ya, a hụrụ ebe e dere ihe Mọdekaị kọrọ+ banyere Bigtena na Tiresh, mmadụ abụọ na-eje ozi+ n’obí eze, ndị nche ọnụ ụzọ, bụ́ ndị chọrọ igbu Eze Ahazuirọs. 3 Eze wee sị: “Olee oké ihe e meere Mọdekaị ma ọ bụ ùgwù a kwanyeere ya maka ihe a?” Ndị na-ejere eze ozi, bụ́ ndị ozi ya wee sị: “Ọ dịbeghị ihe e meere ya.”+ 4 E mesịa, eze sịrị: “Ònye nọ n’obí m?” N’oge a, Heman nọ n’ogige dị ná mpụga+ nke ụlọ eze ịgwa eze ka a kwụgbuo Mọdekaị n’osisi+ nke ọ rụrụ maka ya. 5 Ndị na-ejere eze ozi wee sị ya: “Lee Heman+ ka o guzo n’obí eze.” Eze wee sị: “Gwanụ ya ka ọ bata.” 6 Mgbe Heman batara, eze sịrị ya: “Gịnị ka a ga-emere nwoke nke eze nwere mmasị+ ịkwanyere ùgwù?” Heman wee kwuo n’obi ya, sị: “Olee onye eze ga-enwe mmasị ịkwanyere ùgwù karịa mụ onwe m?”+ 7 Heman wee sị eze: “Nwoke ahụ eze nwere mmasị ịkwanyere ùgwù, 8 ka a chịta uwe eze nke eze na-eyi,+ kpụtakwa ịnyịnya eze na-anọkwasị,+ bụ́ nke e kekwasịworo ákwà isi nke ndị eze n’isi ya. 9 Ka e nyefeekwa uwe ahụ na ịnyịnya ahụ n’aka otu n’ime ndị isi a ma ama nke eze;+ ha ga-eyiwe nwoke ahụ eze nwere mmasị ịkwanyere ùgwù uwe, ha ga-emekwa ka ọ nọkwasị n’elu ịnyịnya ahụ gbagharịa n’ámá+ obodo,+ ha ga-anọkwa ya n’ihu na-eti, sị, ‘Otú a ka a na-emere nwoke nke eze nwere mmasị ịkwanyere ùgwù.’”+ 10 Ozugbo ahụ, eze gwara Heman, sị: “Ngwa, chịrị uwe, kpụrụkwa ịnyịnya dị nnọọ ka i kwuru gaa meere Mọdekaị onye Juu ahụ bụ́ onye na-anọ n’ọnụ ụzọ ámá eze otú ahụ. Ahapụkwala ime nke ọ bụla n’ime ihe niile i kwuru.”+ 11 Heman wee chịrị uwe,+ kpụrụkwa ịnyịnya gaa yiwe Mọdekaị+ uwe, meekwa ka ọ nọkwasị n’elu ịnyịnya ahụ wee gbagharịa n’ámá+ obodo ahụ, nọrọkwa ya n’ihu na-eti, sị:+ “Otú a ka a na-emere nwoke eze nwere mmasị ịkwanyere ùgwù.”+ 12 E mesịa, Mọdekaị gaghachiri n’ọnụ ụzọ ámá eze.+ Ma Heman lara n’ụlọ ya ọsọ ọsọ, na-eru uju, werekwa ihe kpuchie isi ya.+ 13 Heman wee gaa kọọrọ Ziresh+ nwunye ya na ndị enyi ya niile ihe niile dakwasịrị ya. Ndị amamihe ya+ na Ziresh nwunye ya wee sị ya: “Ọ bụrụ na Mọdekaị, bụ́ onye ị maliteworo ịda n’ihu ya, si ná mkpụrụ ndị Juu pụta, ị gaghị enwe ike imeri ya, kama ị ghaghị ịda n’ihu ya.”+ 14 Ka ya na ha ka nọ na-ekwurịta okwu, ndị na-eje ozi n’obí eze bịara kpọrọ Heman ọsọ ọsọ+ gawa oriri+ ahụ Esta kwadebere.